Bogga ugu weyn Dib -u -eegista Amaahda Springleaf 2022: Sharci ama Fadeexad
Amaahda Springleaf (hadda OneMain Maaliyadeed) waa shirkad amaahiyayaal hoosaad ah. Hadafkooda ugu weyn wuxuu ku wajahan yahay amaah halis sare leh, amaah dulsaar leh. Tan waxaa ka mid ah amaahda shaqsiga ah iyo deymaha hantida la hubo (sida deymaha lahaanshaha otomaatiga ah).
Shirkaddu waxay siisaa amaahda shakhsi ahaaneed ee deyn-qaadayaasha hoose iyada oo loo marayo foom codsi online ah. Si kastaba ha ahaatee, si aad u dhammaystirto deynta, waa inaad booqataa mid ka mid ah goobaha tafaariiqda ee shirkadda si aad ula hadasho wakiilka amaahda. Heerarka ayaa laga yaabaa inay sarreeyaan, laakiin amaah-bixiyuhu wuxuu aqbalaa amaah-qaatayaasha leh buundooyinka kredit hoose.
Taariikhda kooban ee amaahda baabuurta ee maaliyadeed ee guga
Faa'iidooyinka waaweyn ee isticmaalka amaahda springleaf
Lacag caddaan ah oo degdeg ah
Xulashada amaahda sugan
Waa maxay amaahda springleaf Heerarka iyo Shuruudaha?
Waa maxay tabashooyinka aan ka walwalo sida amaah -bixiye?
Sideen Ku Helaa Amaah Leh Xilliga Guga?
Hadalkii Ugu Dambeeyay
OneMain Financial waxaa ka helay Springleaf Financial sanadka 2015 Citigroup. Iyada oo qayb ka ah is -dhexgalka, shirkadda la isku daray waxay qaadatay magaca OneMain. Isla sannadkaas laamaha Springleaf ayaa loo beddelay OneMain Financial si ay u muujiyaan isbeddelka. Amaah kasta oo aad ka qaadatay Springleaf hadda waxaa iska leh oo u adeega OneMain Financial.
Waxay haystaan ​​ku dhawaad ​​$ 14 bilyan oo deyn ah, iyadoo in ka badan 40% lagu amaahday hanti sida baabuur. OneMain Financial waxay diiradda saareysaa siinta macaamiisha qiimaha ugu fiican iyo khibradda amaahda ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
Haddii OneMain aysan ku habboonayn baahiyahaaga, waxaa jira daraasiin bixiyeyaasha amaahda shaqsiyeed kale sida Net credit, Upstart, iwm.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Amaah Ganacsi Aan La Hubin Ee Ugu Fiican 2022
XIDHIIDHKA: 10 Tillaabo oo Wax ku ool ah si aad u hesho Amaah Ganacsi 2022
Helitaanka dhibcaha dhibcaha ee bilaashka ah. Siciradu aad bay u sarreeyaan marka la barbar dhigo deyn -bixiyayaasha kale ee u adeega amaah -bixiyeyaasha la midka ah.
Waxaa laga yaabaa inay maalgeliso daynta isla maalintaas. Wuxuu qaadaa khidmadda asalka.
Waxay bixisaa ikhtiyaarro amaah oo wada jira iyo kuwo sugan. $ 25,000 deynta ugu badan
Ma jiro ganaaxyo hore u bixin ah Kaliya wuxuu bixiyaa amaah shaqsiyeed
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Dib u eegida Amaahda Shakhsiyeed ee Upstart 2022
Amaahda shakhsi ahaaneed ee OneMain waxaa badanaa loo isticmaalaa xoojinta deynta, arooska iyo kharashyada caafimaadka, mashaariicda hagaajinta guriga, iyo maalgelinta baabuurta. Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee isticmaalka adeeggooda.
OneMain, waa hubaal inaad heli doonto deyntaada isla marka la oggolaado daahid la'aan. Waxaad buuxin kartaa codsi oo waxaad ku heli kartaa go'aan in ka yar 10 daqiiqo. 1-2 maalmood oo shaqo gudahood, waxaad lacag ku heli kartaa lacag bixinta bangiga ama jeeg. Nidaamku wuxuu kaaga baahan yahay inaad booqato laanta OneMain si aad u dhammaystirto.
Amaahda caleen gu'ga waxaa laga yaabaa inay bixiso caymis deymo oo ikhtiyaari ah oo leh deymo sugan ama aan la hubin. Caymiskani wuxuu ku darayaa kharashyadaada. Waxaan kugula talineynaa inaad hesho faahfaahin buuxda oo ku saabsan deyntooda ka hor intaadan dooran caymiska deynta.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Amaahda Ardayga ee La Kabo Vs Aan La Kabayn: Midkee Ayaa Aad U Tagi Kartaa?
Waxa kale oo aad codsan kartaa deyn sugan, taas oo laga yaabo inay kaa caawiso inaad u qalanto APR hoose, qadarka deynta weyn, ama muddada dheer ee amaahda marka la barbar dhigo deyn aan la hubin. OneMain waxay aqbashaa koobab baabuur oo leh VINs dammaanad ahaan.
Amaahda Springleaf waxay leeyihiin dammaanad ku qanacsanaanta toddoba maalmood ah, muddadaas oo deyn-bixiyuhu uu go'aansan karo inuu kansalo deyntiisa.
Waxay bixiyaan amaah u dhexeeya $ 1,500 - $ 30,000. Dhammaan amaahda ay bixiso OneMain Financial waa amaahda qaybinta oo leh lacag -bixinno bille ah. Shuruudaha deymaha ayaa u dhexeeya 24 ilaa 60 bilood.
XIDHIIDHKA: Harooyinka Weyn Amaahda Ardayga Dib -u -Eegid Buuxda 2022
Ogow sidoo kale in dhammaan bixinta amaahda ay la socdaan khidmad asal ah, taas oo ku kala duwanaan karta macaamilka ilaa macaamilka. Iyada oo APR deyn ah oo u dhaxaysa 16.05% ilaa 35.99%.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Amaahda Maaliyadda Shaqsiyeed ee ugu Fiican
Amaahiyeyaasha leh sumcad xun, laakiin hanti qiimo leh sida baabuur ama RV, ayaa laga yaabaa inay awood u yeeshaan inay deyn ka helaan OneMain Financial iyagoo u adeegsanaya hantida dammaanad ahaan. Laakiin dadka amaahda bixiya ee ka maqnaada lacag -bixinta ayaa laga yaabaa inay ku dambayso in baabuurkoodu dib ula wareego shirkadda.
Si aad deyn uga hesho OneMain (oo hore u ahaan jirtay Springleaf), waa inaad buuxisaa arjiga onlaynka ah oo ay ku jiraan macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan naftaada iyo duruufahaaga. Haddii codsiga la oggolaado, markaa waa inaad booqataa mid ka mid ah xafiisyadooda laanta si aad u dhammaystirto hawsha arjiga.
Qadarka amaahda ee qofku ka heli karo OneMain waxay u dhaxaysaa $1,500 ilaa $20,000, taas oo ku filan qaar badan oo ka mid ah isticmaalka caadiga ah ee deynta shakhsi ahaaneed.
Heerarka dulsaarka aad ka heli doonto OneMain way ka sarreeyaan shirkado kale oo badan oo amaah ah, qayb ahaan sababtoo ah rabitaanka ay u qabaan inay qaataan dadka leh taariikh deymeed liita. Heerarka boqolkiiba sannadlaha ahi waxay u dhexeeyaan 18.00%% ilaa 35.99%%.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 10 Deyn Ganacsi Oo U Fiican BadCredit
Haddii aad u baahan tahay deyn deyn guri, sinnaan guri, ama deyn baabuur oo dhaqameed, waxaad u baahan doontaa inaad meel kale raadiso maadaama OneMain laga yaabo inaysan ahayn meesha kugu habboon.
Si kastaba ha ahaatee, hubinta heerkaaga iyo u-qalmitaanka ka hor waa jeeg kredit jilicsan oo keliya. Waa muhiim inaad hubiso shuruudaha gobolkaaga sababtoo ah labadaba ugu yar iyo ugu badnaan way kala duwanaan doonaan iyadoo ku xidhan joqraafiga.
XIDHIIDHKA: Maxay Ka Dhigan Tahay Dhaqaale Gaadhi | Ma mudan tahay | Tusaha Khubarada
Macaamiisha onlaynka ah ama soo-galayaasha ah ayaa dhaqaaluhu si dhaqso ah u helayaa oggolaanshaha ka dib, oo bixinta waajibaadka goor hore ma dhalin doonto ciqaab.
Sida Loo Noqdo Darawal Racecar Lacag La'aan 2022
American Express waa bixiye amaah ah, oo ka duwan kuwa kale. Waxaa la aas aasay 1850kii iyadoo xarunteedu tahay…
10-ka Amaah ee Ardayda Qalinjabinta ugu Fiican 2022
Faallooyinka Adeegyada Amaahda Ardayga ee Harooyinka Weyn 2022
10-ka kanaal ee ugu sarreeya Youtube ee lagu barto Xisaabta